Ogaden News Agency (ONA) – Wax badan ka ogoow xaaladda nolol, nabadgalyo ee qaxootiga Dhadhaab(Warbixin aad u shiilan)+sawiro
Wax badan ka ogoow xaaladda nolol, nabadgalyo ee qaxootiga Dhadhaab(Warbixin aad u shiilan)+sawiro
Posted by ONA Admin	/ April 22, 2015
Tan iyo intii ay dowlada Kenya kudhawaaqday inmudo kooban looga daadgureeyo dadka ku jira xeryaha qoxootiga ee Dhadhaab waxuu walaac balaadhan soo food saaray kumanaanka qaxootiga ah eek u noolaa xerada aduunka ugu wayn ee Dhadhaab.
Dowlada Kenya ayaa iyadu sheegtay in ay xeryaha qoxootigu hooy unoqdeen ama ay kusoo dhuuntaan dadka dhibaatooyinka kasameeya guud ahaan wadanka Kenya gaar ahaan Gobolka Woqooyi Bari Kenya iyo caasimada wadanka ee Nairobi .
Dadka qoxootiga ah ayaa iyagu muujinaya in aysan shuqul kulahayn dhibaatooyinka wadanka ka dhacaya waxayna intaas ku darayaan in aysan awoodba ulahayn in ay dhibaatooyinka intaa la’eg sameeyaan sabab ku kalifaysa in ay dhibaatooyin sameeyaana aysan jirin. Sidoo kale dadka qoxootiga ah ayaa carab baabaya in ay dowladu doonayso in ay dusha kasaarto dambiyo aysan lahayn.
Dhanka kale xaalada nolaleed ee qoxootiga ayaa mugdi sii galaysa kadib markii cunaqabatayn lasaaray ama lajoojiyayba cunadii iyo alaabtii laga keeni jiray wadanka Kenya dariska la ah ee Somalia, waxayna ciidamada amaanka ee wadanka Kenya lawareegayaan dhamaan wixii kasoo gudba xadka Soomaaliya noocuu doonaba ha ahaadee. Wadanka Somalia ayaa laga keenijiray badeecadaha kala duwan sida caanaha, sonkorta iyo bariiska kuwaas oo nolasha qoxootiga kaalin wayn kuleh waxayna miciishada qoxootigu noqotay mid aad qaali u ah. Cunaqabataynta dowlada Kenya waxaa barbarsocda roobab mahiigaan ah oo ka da’ay guud ahaan wadamada Somalia iyo Kenya.
Sidoo kale waxaa allbaabada loo laabay dhamaan xawaaladihii kashaqaynayay guud ahaan wadanka Kenya kuwaas oo saamayn aad u balaadhan kuyeeshay dadka aqootiga ah oo awalba iska liitay kuwaas oo waayay wixii yaraa ee ay dadka qaraabadooda ah usoo tuuri jireen.
Dareenka guud ee dadka qoxootiga ah ayaa ah mid aad ukacsan isla markaana kala duwan. Waxay dadka qaar kuu sheegayaan xaalada uu maanta qoxootigu kusugan yahay in ay dhaanto qoxootiga oo laceliyo, halka qaar kalana ay leeyihiin majirto meel aan kulaaban karo, inkastoo ay xaalada ay mareyso midaan kaga soo qaxnay dhulkaanagii hooyo, waxaanse sugaynaa sida ay wax noqdaan.
Qaxootiga Ogadenia ka soo jeeda oo aad dad ubadan ay ka joogaan xeryaha dhadhaab ayaa dareenka guud lawadaaga dadka qoxootiga waxaase jira arimo ugaar ah. Qoxootiga Somalida Ogadenia ayaa isku raacsan in aysan u muuqanin meel ay sinabad ah ugu laaban karaan waxayna sheegayaan in wadanka Ogadenia uu yahay wadan ay colaad daba dheer ka aloosantahay isla markaana waxay arkaan in ay xaalad adagi ka taagantahay wadankii ay miciinka soo bideen ee Kenya oo mudo kooban qoxootiga u qabtay inay ku laabtaan.
Horjoogayaasha qoxootiga s.ogadenia ayaa iyagu sheegaya in aysan kamid ahayn dadka ay saamaynayso amarkan kasoo baxay dowlada wallow ay soomaali yihiin hadana ay kasoo qaxeen wadan ogadenia layidhaahdo iyaguna ay wali isu yaqaanaan dad ree ogadenia ah oo jooga wadankii siiyay marti galiyada.
Dhanka kale dadka qoxootiga ah ee ku sugan dhadhaab ayaan mudo 7 bilood ah aan qaadanin raashinkii ay qaadan jireen tiro iyo tayo toona, waxaana qoxootiga laga joojiyay burkii oo loogu badalay Gallay iyo raashinka aysan dadku cunin ee Moordida loo yaqaana (Sorgum), waxaana ugu sii darmatay cabsi iyo caga juglayn aad u badan.
Si kastaba ha ahaateen dadka qoxootiga ah ayaa walaaca ay qabaan kasokow ku adkaysanayay in ay ka warsugayaan Hay’ada Qaramada Midoobay uqaabilsan qoxootiga ee UNHCR waxayna sheegayaan in ay sifo sharci ah oo ay dunidu ku heshiisay ku dagan yihiin wadanka Kenya oo ka mid ah wadamada heshiiskaas sixiixay.